Qarax qasaare geystay oo goor dhow ka dhacay Muqdisho – Balcad.com Teyteyleey
Meel aan ka fogeyn isgoyska Dabka ee u dhaxeeya degmooyinka Waaberi iyo Hodon waxaa ka dhacay qarax xoogan oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay, kaasi oo geystay oo qasaarooyin baaxad leh.
Dad tiradoodu ka badan 10-ruux ayaa ku geeriyooday qaraxaasi, kuwaasi oo iyagu intooda badan ahaa dad rayid ah isla markaana ka dhowaa halka uu qaraxa ka dhacay, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 15-ruux.
Dadka dhaawacmay waxaa ka mid ahaa maxaabiis ku jirtay xabsiga saldhigga Degmada Waaberi, kuwaasi oo loo qaaday isbitaalada magaalada Muqdisho, waxaana daqiiqado kaddib markii uu dhacay qaraxa soo gaaray ciidamada ammaanka iyo gaadiidka gurmadka.
Dhinaca kale gaariga qaraxa lagu soo raray ayaa qarxay kaddib markii uu ku yimid goob gaadiidka lagu baaro oo ku taala isgoyska Dabka, halkaasi oo maalmahaanba ciidamada xasilinta Muqdisho ay ka wadeen howlgallo baaritaan.
The post Qarax qasaare geystay oo goor dhow ka dhacay Muqdisho appeared first on Ilwareed Online.
Kusimaha Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo maanta la kulmay Guddiga joogtada ee Golaha Shacabka.